Izinto eziluncedo kuthi - iAojie Mold Co., Ltd ..
1. Inkampani ine-R & D yobungcali kunye neqela lokuvelisa, izixhobo zemveliso eziphambili, ubuchwephesha bokuyila ubuchwephesha kunye nobuchwephesha bokuvelisa umngundo. Ingakumbi kwiimfuno zemihla ngemihla zomngundo, ukungunda kodonga olucekeceke, kunye nokusonga okubunjiweyo. Inkampani yamkela imodeli yolawulo lwangoku ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezibanzi nezikumgangatho ophezulu. Kwaye babambelela ingqikelelo yokubonelela abathengi ngezona zilungileyo kunye nezisombululo zokuyila ukungakhathazeki. Iimveliso zithengiswa phesheya kolwandle kwaye zaphumelela ukuthembakala kunye nokwamkelwa kwabathengi basekhaya nabangaphandle.
2. Ngokusekwe kwingcinga yokuba nobungcali, ucocekile kwaye womelele, inkampani iya kuqhubeka nokwenza ubuchule kunye nokuphucula nabantu abaqeqeshiweyo ukwenza izinto zobungcali kunye nenkqubo yolawulo lobuchule njengesiseko. Rhoqo ukwakha iAojie zomngundo kuyilo olomeleleyo lweplastikhi yoyilo kunye nenkampani yemveliso!
3. Masiqonde iimfuno zakho. Ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo yeplastiki yokubumba iteknoloji. Siza kumamela yonke ingxaki yakho yobugcisa. Zama ukuba ligosa lakho lokungunda. Sinikela ingqalelo kwiinkcukacha kwaye sikhapha ukungunda. Sinikela ingqalelo kumgangatho kwaye sitofa ubomi kwisikhunta. Iziphumo siyixabisile kwaye sikunika ukungunda okungenangxaki.
4. Impendulo ekhawulezileyo: thembisa ukukunika imiyalelo yekoteyishini eneenkcukacha kunye nemveliso yolwazi ngexesha elikhawulezayo; thembisa ukulungisa iimveliso ozifunayo ngexesha elifutshane; Ndithembisa ukwenza esona sicwangciso sihle sohlahlo-lwabiwo-mali ngexabiso elifanelekileyo.
5. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso: Inkampani yethu ithenga izinto ezahlukeneyo ezivela kubenzi kwaye ithenga izinto ezahlukeneyo zokwenza izinto ngobuninzi ukunciphisa iindleko zenkampani, kwaye iqinisekise ukuba iimveliso zikumgangatho ophezulu kwaye ziphantsi kwexabiso, kwaye zisebenzisa ngokufanelekileyo Kwinqanaba lenkampani yethu Ukukhetha abathengi